Amavili asebusika akhwela emkhenkceni nasekhephu
Ihlobo liza kwaye ubusika buyeza. Ngeentsuku zobusika ezibandayo, itayara laseRuiyi lisungule inani lamatayara ashushu asebusika: i-grandtrek sj8 kunye ne-grandtrek sj6 ye-SUV, ebusika i-maxx02, i-Maxx yasebusika kunye ne-dsx-2 yeemoto ezihamba abantu, ukukhusela abathengi kuhambo lwasebusika. Ngoku xa u ...
Nge-25 ka-Agasti ka-2017, iQingdao ruiyi oomatshini bokuvelisa oomatshini., Ltd. uphumelele isihloko sembasa "ye-Intanethi + yeshishini lokuyila kunyaka we-2017".
Nge-25 ka-Agasti ka-2017, iQingdao ruiyi oomatshini bokuvelisa oomatshini., Ltd. uphumelele isihloko sembasa "ye-Intanethi + yeshishini lokuyila kunyaka we-2017". Nge-25 ka-Agasti, "ingqungquthela ye-Qingdao ye-Intanethi + yokuyila ngo-2017" eyabanjwa yi-Qingdao network network yabanjwa kwi-ofisi yamazwe aphesheya ...
Ngo-Epreli 15, 2015, Qingdao ruiyi oomatshini mveliso co., Ltd. wawongwa “ngamashishini alishumi angumzekelo aphezulu kunxweme olusentshona kwisithili esitsha”.
Ngo-Epreli 15, 2015, Qingdao ruiyi oomatshini mveliso co., Ltd. wawongwa “ngamashishini alishumi angumzekelo aphezulu kunxweme olusentshona kwisithili esitsha”. Inkampani ibambelela kwishishini lefilosofi esemgangathweni wokuqala, umthengi kuqala, bayancedisana kwaye benze ukuchuma kunye. Ukuthengisa kwakhona ...
Ivili likaCaster, DB Ivili, Umxube weKhonkrithi yase China, Isondo le-China PU, I-China i-PU Foam Isondo, Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils,